မိတ်ကပ်သာမပါရင် သူတို့ကို တကယ်မှတ်မိကြမှာလား
30 Apr 2018 . 11:10 AM
အရင်ကတော့ Social Media မှာ မိတ်ကပ်အပြည့်နဲ့ အလှဆုံးပုံတွေ တင်ပြီးတော့သာ ကြွယ်ကြတာပါ။ အခုတော့ ခေတ်ကပြောင်းသွားပြီး မိတ်ကပ်မပါ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ရာထစပုံတွေကို #NoMakeup နဲ့ #wokeuplikethis ဆိုတဲ့ Hashtag တွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင်တင်လာကြပါပြီ။
ဒီလိုတင်ပေမယ့်လည်း လူတိုင်းသဘာဝအတိုင်းစင်းလုံးချောလှကြတာမဟုတ်လို့ တချို့က မိတ်ကပ်မပါရင် မထင်ရလောက်အောင်ကို ရုပ်ပြောင်းသွားကြပါတယ်။ အခု ဖော်ပြမယ့် ဆယ်လီတွေကတော့ မိတ်ကပ်မပါတဲ့ ပုံတွေကို အမှတ်မထင်ရိုက်မိတဲ့အခါ သူတိုကို လူတွေ မမှတ်မိလောက်အောင် ဖြစ်ရပုံတချို့ ကို မြင်ရမှာပါ။
အဆိုတော် Demi Lovato ကတော့ မကြာခဏ မိတ်ကပ်မပါတဲ့ ပုံတွေ တင်နေကြပါပဲ။ သူ့ရဲ့ မိတ်ကပ်မပါ၊ Retouch လည်း မလုပ်ထားတဲ့ ပုံတွေကို Vanity Fair နဲ့ တွဲပြီးလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အပြုသဘောဆောင်အမြင်ရှိဖို့အတွက် ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီပုံမှာတော့ သူ့ကို မြင်နေကျ အနက်ရောင်ဆံပင်နဲ့ မဟုတ်လို့ပဲလား၊ မျက်မှန်ကြောင့်လား မသိပေမယ့် မှတ်မိဖို့ မလွယ်တာတော့ သေချာပါတယ်။
Super Bass ကြီး Nicki Manaj ကတော့ အမြဲတမ်းမိတ်ကပ်အပြည့်နဲ့ လင်းလက်တောက်ပစွာ တွေ့ရတတ်သူပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ အခုလို ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ Selfie မှာ Eye Shadow နဲ့ မျက်တောင်ဆက်ထားတာတွေ မပါတဲ့ ပုံကို တွေ့ရတော့ သူ့ကို အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ကလီယိုပက်ထရာလို ဒီဇိုင်းတော့ ပျောက်သွားတာ အမှန်ပါပဲ။
အသက်ကြီးပေမယ့် လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ Sharon Stone တစ်ယောက်ဟာလည်း ဒီပုံမှာ မိတ်ကပ်ရော၊ Filter တောင်မသုံးထားတဲ့အတွက် Sharon Stone မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ နှစ်ခါမက ပြန်ကြည့်ယူရပါတယ်။
ဒါကတော့ Katy Perry ရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Russell Brand က Twitter မှာ ၂၀၁၀ လောက်က တင်လိုက်တဲ့ပုံပါ၊ တင်ပြီး မကြာခင်မှာ ပြန်ဖျက်ခဲ့ပေမယ့် ပုံကတော့ ပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူသားထဲက လူတစ်ယောက်ပဲမို့ Snapshot မိတဲ့အချိန်မှာ ဒီလို ပုံတွေ ထွက်လာတတ်တာ သိပ်တော့ မဆန်းကြယ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီပုံကတော့ အားကစားလုပ်ပြီးချိန်မှာ ရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံမို့ ချွေးတွေရွှဲ၊ အဆီတွေပြန်နေတတ်တာ သဘာဝပါ။ ပြင်လိုက်ဆင်လိုက်ရင်တော့ တကယ့်နတ်မိမယ်တစ်ပါးလိုဆိုတာ Jessic Alba ပရိသတ်တိုင်းက သိကြမှာပါ။
Lady Gaga ကိုတော့ အမြဲတမ်း မိတ်ကပ်အပြည့်နဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ထူးခြားဝတ်စုံတွေနဲ့ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီပုံထဲမှာတော့ “Born This Way” အဆိုတော်ဟာ သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဆံပင်အရောင်နဲ့ အိပ်ရာထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိနေတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက် လူတောင်မှားရတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
ဒါကတော့ Metal နဲ့ Rock အဆိုတော်ကြီး Marilyn Manson တစ်ယောက်မိတ်ကပ်မပါတဲ့ပုံပါ၊ တကယ်တော့ ဒီပုံက သူကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ ပုံမဟုတ်ဘဲ Marilyn Manson Wiki ဆိုတဲ့ Twitter က ဒီလို သူ့ရဲ့ မိတ်ကပ်မပါတဲ့ Snapshot ပုံကို တင်ထားခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ တက်ကြွရဲရင့်တဲ့ ပုံကနေ လုံးဝပြောင်းလဲသွားတာတော့ အသိသာကြီးပါပဲ။
Adele ရဲ့ Makeup Look ကတော့ ပါးရိုးပေါ်မှာ ပါးနီများများနဲ့ သွက်လက်တက်ကြွတဲ့ စတိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ Instagram မှာလည်း မ်ိတ်ကပ်ရော ၊ Filter ပါ မပါတဲ့ ပုံမျိုးလည်း တင်ဖို့ မကြောက်ရွံ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ Instagram Account မှာဆိုရင် ခုလို မိတ်ကပ်မပါတဲ့ ပုံတွေအများကြီးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒါကြောင့်ပဲ Adele က “I don’t make music for eyes. I make music for ears.” လို့ ယုံကြည်မှုရှိရှိဆိုခဲ့တာပါ။
ဒီပုံကတော့ Taylor Swift မတ်လ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က တင်ခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပြီး ပြန်ဖျက်လိုက်တာလည်း ကြာပါပြီ။ “I woke up like this” ဆိုတဲ့ ဒီ Post မှာ သူဟာ ဆယ်လီတစ်ယောက်ဆိုတာထက် သာမန်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပိုတူနေခဲ့ပါတယ်။
မင်းသမီး Eva Longoria ဟာလည်း မိတ်ကပ်မပါတဲ့ သဘာဝရုပ်ရည်ကို အပြင်မှာရော၊ Social Media မှာပါ ပြသဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ သူမျိုးပါ။ ဒါကြောင့်လည်းသူဟာ တောတွင်းခရီးသွားတဲ့ သဘာဝပုံတင်ခဲ့ပြီး မှဲ့ခြောက်နဲ့ အစက်ကလေးတွေကို သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။
Ref : thelist.com
မိတျကပျသာမပါရငျ သူတို့ကို တကယျမှတျမိကွမှာလား
အရငျကတော့ Social Media မှာ မိတျကပျအပွညျ့နဲ့ အလှဆုံးပုံတှေ တငျပွီးတော့သာ ကွှယျကွတာပါ။ အခုတော့ ခတျေကပွောငျးသှားပွီး မိတျကပျမပါ ဒါမှမဟုတျ အိပျရာထစပုံတှကေို #NoMakeup နဲ့ #wokeuplikethis ဆိုတဲ့ Hashtag တှနေဲ့ အပွိုငျအဆိုငျတငျလာကွပါပွီ။
ဒီလိုတငျပမေယျ့လညျး လူတိုငျးသဘာဝအတိုငျးစငျးလုံးခြောလှကွတာမဟုတျလို့ တခြို့က မိတျကပျမပါရငျ မထငျရလောကျအောငျကို ရုပျပွောငျးသှားကွပါတယျ။ အခု ဖျောပွမယျ့ ဆယျလီတှကေတော့ မိတျကပျမပါတဲ့ ပုံတှကေို အမှတျမထငျရိုကျမိတဲ့အခါ သူတိုကို လူတှေ မမှတျမိလောကျအောငျ ဖွဈရပုံတခြို့ ကို မွငျရမှာပါ။
အဆိုတျော Demi Lovato ကတော့ မကွာခဏ မိတျကပျမပါတဲ့ ပုံတှေ တငျနကွေပါပဲ။ သူ့ရဲ့ မိတျကပျမပါ၊ Retouch လညျး မလုပျထားတဲ့ ပုံတှကေို Vanity Fair နဲ့ တှဲပွီးလညျး အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို အပွုသဘောဆောငျအမွငျရှိဖို့အတှကျ ရိုကျကူးခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒီပုံမှာတော့ သူ့ကို မွငျနကြေ အနကျရောငျဆံပငျနဲ့ မဟုတျလို့ပဲလား၊ မကျြမှနျကွောငျ့လား မသိပမေယျ့ မှတျမိဖို့ မလှယျတာတော့ သခြောပါတယျ။
Super Bass ကွီး Nicki Manaj ကတော့ အမွဲတမျးမိတျကပျအပွညျ့နဲ့ လငျးလကျတောကျပစှာ တှရေ့တတျသူပါ။ ဒါကွောငျ့ပဲ အခုလို ရခြေိုးခနျးထဲမှာ ရိုကျထားတဲ့ Selfie မှာ Eye Shadow နဲ့ မကျြတောငျဆကျထားတာတှေ မပါတဲ့ ပုံကို တှရေ့တော့ သူ့ကို အမွဲတှရေ့လရှေိ့တဲ့ ကလီယိုပကျထရာလို ဒီဇိုငျးတော့ ပြောကျသှားတာ အမှနျပါပဲ။
အသကျကွီးပမေယျ့ လှသှေးကွှယျနတေဲ့ Sharon Stone တဈယောကျဟာလညျး ဒီပုံမှာ မိတျကပျရော၊ Filter တောငျမသုံးထားတဲ့အတှကျ Sharon Stone မှ ဟုတျရဲ့လားလို့ နှဈခါမက ပွနျကွညျ့ယူရပါတယျ။
ဒါကတော့ Katy Perry ရဲ့ ခငျပှနျးဟောငျးဖွဈတဲ့ Russell Brand က Twitter မှာ ၂၀၁၀ လောကျက တငျလိုကျတဲ့ပုံပါ၊ တငျပွီး မကွာခငျမှာ ပွနျဖကျြခဲ့ပမေယျ့ ပုံကတော့ ပွနျ့သှားခဲ့ပါတယျ။ လူသားထဲက လူတဈယောကျပဲမို့ Snapshot မိတဲ့အခြိနျမှာ ဒီလို ပုံတှေ ထှကျလာတတျတာ သိပျတော့ မဆနျးကွယျဘူးလို့ ထငျပါတယျ။
ဒီပုံကတော့ အားကစားလုပျပွီးခြိနျမှာ ရိုကျတဲ့ ဓာတျပုံမို့ ခြှေးတှရှေဲ၊ အဆီတှပွေနျနတေတျတာ သဘာဝပါ။ ပွငျလိုကျဆငျလိုကျရငျတော့ တကယျ့နတျမိမယျတဈပါးလိုဆိုတာ Jessic Alba ပရိသတျတိုငျးက သိကွမှာပါ။
Lady Gaga ကိုတော့ အမွဲတမျး မိတျကပျအပွညျ့နဲ့၊ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး ထူးခွားဝတျစုံတှနေဲ့ တှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ ဒီပုံထဲမှာတော့ “Born This Way” အဆိုတျောဟာ သူ့ရဲ့ ပငျကိုယျဆံပငျအရောငျနဲ့ အိပျရာထဲမှာ သကျတောငျ့သကျသာရှိနတေဲ့ပုံဖွဈတဲ့အတှကျ လူတောငျမှားရတယျလို့ ဆိုရပါမယျ။
ဒါကတော့ Metal နဲ့ Rock အဆိုတျောကွီး Marilyn Manson တဈယောကျမိတျကပျမပါတဲ့ပုံပါ၊ တကယျတော့ ဒီပုံက သူကိုယျတိုငျတငျထားတဲ့ ပုံမဟုတျဘဲ Marilyn Manson Wiki ဆိုတဲ့ Twitter က ဒီလို သူ့ရဲ့ မိတျကပျမပါတဲ့ Snapshot ပုံကို တငျထားခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ တကျကွှရဲရငျ့တဲ့ ပုံကနေ လုံးဝပွောငျးလဲသှားတာတော့ အသိသာကွီးပါပဲ။
Adele ရဲ့ Makeup Look ကတော့ ပါးရိုးပျေါမှာ ပါးနီမြားမြားနဲ့ သှကျလကျတကျကွှတဲ့ စတိုငျပါ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ Instagram မှာလညျး မိတျကပျရော ၊ Filter ပါ မပါတဲ့ ပုံမြိုးလညျး တငျဖို့ မကွောကျရှံ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ Instagram Account မှာဆိုရငျ ခုလို မိတျကပျမပါတဲ့ ပုံတှအေမြားကွီးတှရေ့မှာ ဖွဈပွီး ဒါကွောငျ့ပဲ Adele က “I don’t make music for eyes. I make music for ears.” လို့ ယုံကွညျမှုရှိရှိဆိုခဲ့တာပါ။
ဒီပုံကတော့ Taylor Swift မတျလ ၂၀၁၅ ခုနှဈက တငျခဲ့တဲ့ပုံဖွဈပွီး ပွနျဖကျြလိုကျတာလညျး ကွာပါပွီ။ “I woke up like this” ဆိုတဲ့ ဒီ Post မှာ သူဟာ ဆယျလီတဈယောကျဆိုတာထကျ သာမနျကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့ ပိုတူနခေဲ့ပါတယျ။
မငျးသမီး Eva Longoria ဟာလညျး မိတျကပျမပါတဲ့ သဘာဝရုပျရညျကို အပွငျမှာရော၊ Social Media မှာပါ ပွသဖို့ ဝနျမလေးတဲ့ သူမြိုးပါ။ ဒါကွောငျ့လညျးသူဟာ တောတှငျးခရီးသှားတဲ့ သဘာဝပုံတငျခဲ့ပွီး မှဲ့ခွောကျနဲ့ အစကျကလေးတှကေို သဘာဝအတိုငျးတှရေ့မှာပါ။